पिएबाटै मन्त्रीको फेसबुक ह्याक गरेपछि हनुमान ढोकामा हंगामा, यसरी गरिएको रहेछ ह्याक – Etajakhabar
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का अध्यक्ष नैनसिंह महर गत महिना अमेरिका गए । त्यहाँ पुगेको केही दिनपछि फेसबुक खोल्दा पासवर्ड मिलेन । उनलाई विदेशमा भएकाले केही समस्या भएजस्तो लाग्यो । पटक–पटक पासवर्ड हान्दा पनि नखुलेपछि भने उनी सशंकित भए । वास्तवमा उनको फेबसबुक ह्याक गरेर अरू कसैले चलाइरहेको थियो । नेपाल आएपछि उनले अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुमा उजुरी दिएका छन् । तर, उनको फेसबुक रिकभर हुन सकेको छैन । उनीजस्तै २० भन्दा बढी देशका चर्चित व्यक्तिहरू यतिवेला फेसबुक ह्याक भएको भन्दै उजुरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका छन् । फेसबुक ह्याक हुँदा धेरै फलोअर्स भएका उनीहरूको फेसबुक अकाउन्ट मात्र गुमेको छैन, गोपनीयतासमेत खुल्ने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ एकैपटक धेरै सेलेब्रिटीको फेसबुक ह्याक हुनुलाई अनौठो पनि मानिएको छ ।
क–कसको भयो ह्याक ? कलाकार ऋषि लामिछाने र सरिता लामिछाने दम्पतीको एकैदिन फेसबुक ह्याक भयो । ऋषिले ह्याक भएको दुई दिनपछि नयाँ फेसबुक अकाउन्ट खोले । त्यो पनि दुई दिनमा नै ह्याक भयो । पटक–पटक आफूहरूको फेसबुक ह्याक हुनु अचम्म भएको सरिता बताउँछिन् । नायिका अशिस्मा नकर्मी, एलिसा राई, गायिका बीमा कुमारी दुरा, गायक भरत सिटौला, स्वस्तिमा राजभण्डारी, विल्सनविक्रम राई, गायिका पुष्पा बोहोरा, शान्ति सुनुवार, सविन श्रेष्ठ, कुमार कट्टेल तथा कवि नवराज पराजुलीले फेसबुक ह्याक भएको प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । एमाले नेतृ रामकुमारी झा“क्री र अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरको समेत फेसबुक ह्याक भएको छ । ह्याक भएकामध्ये केहीको फेसबुक अरेबिक भाषामा चलाइएको छ भने केहीको डिएक्टिभ गरिएको छ । भरत सिटौला, एलिसा राई, रामकुमारी झाँक्री, भूमिका गिरीलगायतको रिकभर भए तापनि अधिकांशको ह्याक नै छ । रिकभरका लागि प्रहरीले फेसबुकलाई इमेल गरेको छ । हजारौँ फलोअर्स भएको र महत्वपूर्ण फोटो र सामग्रीहरू राखिएका फेसबुक ह्याक हुँदा उनीहरू तनावमा छन् । सेलेब्रिटीको हकमा फेबसुकले पटक–पटक रिकभर गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एलिसा रार्इ फेसबुक ह्याक पछिल्लो समय ठूलो समस्या बनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०का निर्देशक पुष्कर कार्की बताउँछन् । कतिपय सेलेब्रिटीलाई त ह्याकरले पैसा माग्दै ब्लाकमेलिङसमेत गरेका छन् । एलिसा राईको इन्स्टाग्राम अकाउन्टसमेत ह्याक भएको छ । गत वर्ष गायिका ज्योती मगरको फेसबुक पनि ह्याक भएको थियो ।
कसरी हुन्छ ह्याक ? नेपालमा खासगरी दुई किमिसबाट फेसबुक ह्याक हुने गरेको छ । ९० प्रतिशत ह्याक ‘फिसिङ’मार्फत हुने गरेको छ । लिंक पठाउने र त्यसभित्र जान फेसबुकको पासवर्ड हाल्न लगाइन्छ । त्यहीँबाट उनीहरूले पासवर्ड थाहा पाएर ह्याक गर्छन् । अर्कोथरी इमलेबाट हुन्छ । फेसबुक चलाउन इमेल आइडी चाहिन्छ । कतिपयले फेसबुक खोल्न छुट्टै इमेल प्रयोग गरेका हुन्छन् । जुन ५/६ महिनासम्म पनि चलाउँदैनन् । लामो समय इमेल नचलाउँदा त्यो डिएक्टिभ हुन्छ र अरूले पनि त्यो आइडी लिन पाउँछन् । केही ह्याकरहरूले सेलेब्रिटीहरूको इमेल पत्ता लगाई फलो गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो इमेल डिएक्टिभ भएपछि आफूले त्यही आइडी बनाएर फेसबुक पासवर्ड बिर्सिएको भन्दै फेसबुकमा कोड पठाउन लगाएर ह्याक गर्छन् । पासवर्ड बिर्सिएको अवस्थामा फेसबुकले इमेलमा कोड पठाउने भएकाले यसरी पनि ह्याक हुने गरेको छ । यसबाहेक पछिल्लो समय विभिन्न फोटोहरूमा क्लिक गर्दा पनि फेसबुक ह्याक हुने गरेको सिआइबीका इन्स्पेक्टर सुरेश थापा बताउँछन् । सकेसम्म नचिनेको मान्छेस“ग फेसबुकमा साथी नबन्न र उनीहरूले पठाएका लिंक तथा फोटोमा क्लिक नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । अनुमानमा मिलाउन सकिने कमजोर पासवर्डका कारण पनि कतिपयको सोसियल अकाउन्ट ह्याक भएका छन् । बलियो र टु स्टेप अथेन्टिकेसन अपनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अरूले पनि प्रयोग गर्ने मोबाइल तथा कम्प्युटरमा सोसियल साइट खोल्दा ‘इन्टरनेट इतिहास’ मेट्नुपर्छ । नत्र सहजै पासवर्ड पत्ता लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा भाइरसहरूका कारण पनि ह्याक हुन सक्ने भएकाले आफूले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर÷ल्यापटप नियमित स्क्यान गर्नुपर्छ ।
पिएबाटै मन्त्रीको फेसबुक ह्याक ! फेसबुक ह्याक भएको भन्दै एक मन्त्रीले हालै महानगरीय अपराध महाशाखामा उजुरी गरे । प्रहरीले अनुसन्धान गरी ह्याक गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर पत्ता लगायो र मन्त्रीलाई जानकारी गरायो । ‘ए आफ्नै मान्छेले बदमासी गरेको रहेछ, छाडिदिनुस्,’ भन्दै मन्त्रीले थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने बताए । किनकि त्यो नम्बर उनकै पिएको थियो । धेरैजसो समय उनको फेसबुक पिएले चलाउँदा रहेछन् । मन्त्रीलाई थाहै नदिई पासवर्ड परिवर्तन गरिदिएपछि ह्याक भएको भन्दै उनले उजुरी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका धेरैजसो नेताहरूको फेसबुक सहयोगीहरूले चलाउने गरेका छन् । जसकारण पटक–पटक समस्यासमेत हुने गरेको छ । प्रविधिको आकर्षण बढे पनि यसबारेमा राम्रो ज्ञान नहुँदा फेसबुकले समस्या निम्त्याउँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीद्वारा सिआइबीमा उजुरी साइबर क्राइममा अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले समेत प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ‘लील बुद्ध’ नामक युवाले अश्लील गाली गरेर फेसबुकमा भिडियो अपलोड गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा रहेका ती युवकले प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने धम्की दिँदै अपलोड गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ ।
त्यस्तै श्रममन्त्री मन्सुरलाई पनि एक युवकले अश्लील गाली गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । रोशन गुरुङ नामक युवाले मन्त्रीलाई दिमाग जा“च गर्नु भन्दै गाली गरेका थिए । दुवै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ ।
दैनिक २० सम्म उजुरी गम्भीर किमिसका अपराधको मात्र अनुसन्धान गर्ने निकाय महानगरीय अपराध महाशाखामा आजभोलि सर्वसाधारणको ठुलै भिड लाग्ने गर्दछ । गम्भीर किसिमका अपराध बढेर नभई साइबर क्राइमसम्बन्धी अपराध बढेर भिड लागेको हो । महाशाखामा साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश महर्जनका अनुसार दैनिक २० वटासम्म उजुरी आउने गरेका छन् । नक्कली फेसबुक खोलेर चत्रिरहत्या गरेको, फेसबुकबाट चिनजान भएका व्यक्तिले ठगी गरेको, मानहानी हुने गरी स्टाटस तथा भिडियो राखेकोदेखि फेसुबकमा गोप्य तस्बिर राखिदिने भन्दै ब्लाकमेल गरेकोसम्म उजुरी पर्ने गरेका छन् । फेसबुकसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानसमेत नहुँदा यससम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन् । त्यस्तै किमिसका उजुरी सिआइबीमा पनि पर्ने गरेका छन् । नेपालमा सिआइबी र महाशाखामा मात्र यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्ष प्रहरी अधिकृत छन् । यससम्बन्धी मुद्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र चल्ने गर्दछ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
फेसबुकले टेर्दैन नेपाललाई नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू बढेपछि फेसबुक भने नेपालप्रति कुनै जिम्मेवार छैन । जसकारण समस्या बढ्दै गएको छ । छिमेकी देश भारतमा फेसबुकको कार्यालय छ । जसकारण कुनै पनि सूचना लिन सहज छ । तर, नेपालमा फेसबुकसम्बन्धी समस्या बढिरहँदा फेसबुकले सहयोग गर्दैन । सिंगापुरमा रहेको कार्यालयलाई कहिलेकाहीँ मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले ने फेसुबकको कार्यालयमा नेपालमा स्थापना गर्न दबाब दिनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेपालमा कति छन् प्रयोगकर्ता ? नेपालमा ७० देखि ८० लाख व्यक्ति सक्रिय रूपमा फेसबुक चलाउने फेसबुककै डाटा छ । जसमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष छन् । फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशत ३४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ समय: १०:४१:५२